महामारीभन्दा ठुलो खतरा सरकारको लापरवाही - Laltin.com
महामारीभन्दा ठुलो खतरा सरकारको लापरवाही
बाटो दुर्घटनाका घटनाहरु दिन प्रति दिन बढ्दै गईरहेको छन्। कोरोना भन्दा ठुलो महामारी बन्न पुगेको छ- बाटो दुर्घटना । यस्ता दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर अन्य देशको तुलनामा नेपालमा धेरै नै छन्। बजेटमा बाटो पूर्वाधारका लागि वर्षेनी खर्बौं रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि, दुर्घटनाको दरलाई न्युनीकरण गर्न सकेको छैन। यसमा सवारी साधन दुर्घटना मात्र नभएर पैदलयात्रीहरुले सामना गरेका दुर्घटना पनि पर्छन्। यस आर्थिक वर्ष बाटो क्षेत्रको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ। बाटोका कार्य भइरहे पनि महिना दिन नबित्दै पिच भत्किने, बाटो भासिने गरेको देखिएको छ।
नागरिक न्युजले रिपोर्ट गरे अनुसार असोज ५ गतेको मुसल्धारे पानी परेको बेला ढलमा खसेर बेपत्ता भएका थिए कपन मिलनचोक निवासी १० वर्षिय बालक उज्वल विश्वकर्मा। बिगत चार वर्ष देखि कपनको बाटो बिग्रिएको अवस्थामै छ। बालक खसेका सो ढल छोपिएको थिएन। ५ दिन पछाडी बालकको शव लालितपुरमा भेटिएको छ। यो त एक उदाहरण मात्र हो। यस्ता धराप हरेक गल्ली, हरेक चोकमा छन्। खसेको बालकलाई बचाउन तुरुन्तै जाँदा बालक बेपत्ता छ। खोलामा खसेको पनि होइन, एउटा च्यानलाइज भएको ढलमा खसेर तुरुन्तै बचाउन जाँदा पनि बालकलाई तुरुन्तै भेटिँदैन भने जिम्मेवार को त? यो त राष्ट्रद्वारा गरिएको हत्या नै हो। पुर्वाधार निर्माणको सङ्ख्या वृद्दि भएको देखिएपनि, गुणस्तर छैन।
चितवनको भरतपुर र देवघाट जोड्न बनाउँदै गरिएको पुल चैत्र २४ गते निर्माणाधीन अवस्थामा मै भत्केको छ। २०७० सालको कार्तिकमा सो पुलको करार एड्भेन्चर कन्सट्रक्सनले हासिल गरेको थियो। ३ वर्षमा कार्य समापन गर्ने निधो भएपनि म्याद नजिकिँदै गर्दा पुलको डिजाइन परिवर्तन भएकोले म्याद लम्बिएको थियो। ८ वर्षपछि बल्ल बल्ल पुलको ७०% काम सकिन लाग्दा पुल भत्केको थियो। यदि पुल निर्माण भइसकेर यस्तो घटना भएको भए मान्छे कै ज्यान जोखिममा पर्न सक्थ्यो। यस्तो लापरवाही सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्ने होइन र? कमिशनको चक्करमा जनताको ज्यानको पर्वाह नै नगर्नु र जनताको रक्षा गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। कमजोरी मात्र नभइ नियोजित हत्या नै भन्दा दुईमत हुँदैन।
बबई खोला माथि बनेको जबदिघाट पुल पनि नर्माण भईसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु अगावै बाढीले भत्काएको थियो।पप्पु कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको पुर्वाधारको हबिगत हरेक परियोजनामा यस्तै देखिँदै आएको छ।त्यैपनि किन बारम्बार त्यहि कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो? यसैगरी, सोहि कम्पनीद्वारा निर्मित टेकु पुलको पनि हालत यस्तै छ।
सरकारको विकासको काममा अहिले मात्र हैन वर्षौ देखि प्रश्न उठ्दै आएको छ तर सत्ता र कुर्सीका लागि लिप्त दलहरूलाई जनता र विकासको लागि सोच्ने फुर्सद कहाँ हुन्थ्यो र ? विकासका लागि छुट्टाईएका बजेटहरू के साच्चै विकासमै खर्च भई रहेका छन् कि विकास कागजमा मात्र सीमित छन् ? अस्थिर राजनीतिबाट आजाद भएका जनताहरू विकास चाहन्छन तर बिडम्बना असारे विकास भन्दा बाहेक कुनै ठोस विकास नेपाली जनताले पाउन सकेनन् । विकासका लागि बजेट अपूग भएको पनि हैन, बजेट प्रशस्त छुट्याईन्छ तर सरकारी ढिला सुस्तीका कारण समयमा काम सुचारु हुदैन अनि फ्रिज हुन लागेको बजेटलाई असारे विकासमा खर्च गरिन्छ ।वर्षभरी कानमा तेल हालेर बस्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर धमाधम विकासका काम गर्ने परिपाटी वर्षौ देखी चल्दै आईरहेको छ। यसरी गरिएको काम गुणस्तरहीन हुन पुग्छ अनि वर्षामा आएको भेलसँगै बगेर जान्छन् यस्ता विकासहरू, फलस्वरूप वर्षेनी सयौं निर्दोष अनुहारहरू अकालमा ज्यान गुमाउन विवश हुन्छन् । न त यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ न त सरकारी संयन्त्रले दोष मात्र पाकृतिक प्रकोपलाई दिईन्छ ।
यहि लापरबाहीको एक फल हो उज्वल विश्वकर्मासँग भएको घटना। संबिधानले दिएको आधारभुत अधिकार पनि जनतालाई सुनिश्चित हुँदैन भने नेपालीलाई स्वदेशमै बस्न प्रोत्साहन कसरी गर्ने? के सरकार साँच्चिकै जनताको लागि हो त?
Tags: top-news Trending
Previous: सर्लाहीका आठवटै सीमानाका खुला
Next: मनाङ आउने पर्यटकलाई स्वागत